कोरोना वायरस रिलीफ - कसले कती रकम पाउने ?
ब्यक्तिगत टैक्स फाइल गर्ने हरु का लागि योग्य रकम
के तपाई बयक्तिगत टैक्स फाइल गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने तपाई कम्तिमा १२०० डालर को योग्य हुनुहुन्छ । तर यो रकम कम पानी हुनसक्छ यदि तपाई ७५००० भन्दा बढ़ी रकम एक साल मा कमाउनुहुन्छ भने । बिल को अनुसार, यो रकम ५ प्रतिसत ले कम गर्ने व त्यों भन्दा पनि माथि छ भने १० प्रतिसत को हिसाबले कम हुने जनाएको छ ।
संयुक्त रूप मा टैक्स फाइल गर्नेहरुका कती पाउने ?
जो कोई पनु परिवार वा संयुक्त रुपमा टैक्स फाइल गर्नुहुन्छ भने सो परिवार बाला कम्तिमा २४०० डालर प्लस ५०० डालर प्रत्येक बचा ले पौने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ । तथापि , यो रकम तपाईको इनकम ले बढ़ने र घटने पनि सम्भाबना देखिएको जानकारी गराइन्छ ।
यदि तपाई को इनकम दुबई जाना मिलाएर १५०००० साल को छ भने पनि तपाई यो रकम पाउने योग्य हुनुहुन्छ । तर, त्यही रकम वा सो भन्दा माथि कमाउनु हुन्छ भने ५ प्रतिसत को हिसाबले घटने जानकारी गरयएको छ ।
हेड ऑफ़ द फॅमिली को रुपमा फाइल गर्ने हरु कती पाउने ?
जो कोई पनि हेड ऑफ़ द को रुपमा टैक्स फाइल गर्नुहुन्छ भने सो मानिस पनि १२०० र ५०० प्रत्येक बच्चा हिसाबले पाउने निर्णय भएको छ । तर यो रकम घटबढ़ हुने पनि जानकारी गरिएको छ यदि त्यों इंडीविसुअल को इनकम ११२००० भन्दा माथि छ भने । यो घटबढ़ प्रत्येक बच्चा को हिसाब ले हुने भने जानकारी गराएको छ ।
कहिले र कसरी भुक्तानी गरिने ?
बिल को अनुसार, यो रकम टैक्स फाइल भन्दा पनि छिटो गरिने तय भएको छ । अधिकारीहरु का अनुसार यो रकम अमेरिकीहरुको खोलती मा छिटो भन्दा छिटो आउने सम्भाबना देखिएको छ । यो रकम चेक मार्फत होईन, डायरेक्ट अमेरिकीहरुको बैंक अकाउंट मा जमा गरिने जानकारी दिइएको छ । यो रकम फाइल टैक्स को अनुसार गरिने पनि जानकारी दिइएको छ । जो कोई पनि २०१९ को फाइल अहिलेसम्म गरेको छैन भने सो बयक्ति को रकम फाइल २०१८ को हिसाबले तय गरिने निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । व्यक्तिको अन्तिम ज्ञात ठेगानामा भुक्तानको १५ दिन भित्र विधि र भुक्तानीको जानकारी सूचित पठाउने जानकारी गराएको छ ।